Coin Stats - Crypto portfolio tracker 2.5.0.9 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.5.0.9 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား ေငြေရးေၾကးေရး Coin Stats - Crypto portfolio tracker
Coin Stats - Crypto portfolio tracker ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Also you can join our telegram community at https://t.me/coinstatsapp
အကြွေစေ့ Stats ကတော့အဆိုပါ # 1 အခမဲ့ Bitcoin & cryptocurrency အစုစုကိုခြေရာခံခြင်း App ဖြစ်ပါတယ်။
track Bitcoin, Ethereum, Litecoin နှင့် 100 ကျော်ဖလှယ်မှုကနေ 3000 ကျော် altcoins စျေးနှုန်းများ။ သငျသညျကိုယ်တိုင်အရောင်းအ add ရန်မလိုပါဒါကြောင့်သင့်အကြွေစေ့ Stats ကတော့အစုစုကိုမှအလိုအလျှောက်သင်၏ဒေသသုံးငွေကြေးနှင့်ထပ်တူပြုခြင်းကိုသင်အကြိုက်ဆုံးဖလှယ်မှုနှင့်ပိုက်ဆံအိတ်ကိုသုံးပါ။ အဆိုပါ app ထဲမှာ Real-time အတွက်အရာရာကိုကြည့်ပါ။
လာမယ့်ကြီးမြတ်အကြွေစေ့ကိုရှာပါ။ အကြွေစေ့ Stats ကတော့သင်၏နောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက် sorting နှင့်သုတေသန, သင်အဆင့်မြင့် filtering ကိုလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ သငျသညျတတ်နိုင်သမျှသတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်အလို့ငှာမဆို cryptocurrency, ၎င်းတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်လင့်များ, reddit, twitter နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးပေါ် data တွေကိုရယူနှင့်ရက်စွဲသတင်းမှတက်ဖတ်နိုင်သည်။
* TRACK ကျွန်တော်ဒင်္ဂါးပြား
တစ်ဦးဝယ်သို့မဟုတ်အရောင်းရဆုံးအခွင့်အလမ်းကိုလက်လွတ်ဘယ်တော့မှမ။ အလွယ်တကူခြေရာခံများနှင့်အတိုင်းလိုက်နာ 3000 ကျော် cryptocurrencies များ၏စျေးနှုန်းများနှင့်၎င်းတို့၏ဇယားနှင့် analytical data တွေကိုရယူသုံးပါ။ သင်အသုံးပြုနေတဲ့နေလဲလှယ်ကို select သို့မဟုတ်အားလုံးကိုဖလှယ်မှုကိုဖြတ်ပြီးပျမ်းမျှအားစျေးနှုန်းများကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သင်တို့ကိုလည်းတခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိသိမ်းထားချင် "အကြိုက်ဆုံး" ဒင်္ဂါးပြား။
* သင့် Portfolio
တဦးတည်းမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သင်၏တစ်ခုလုံးကိုအစုစုကိုကြည့်ရှုပါ။ အကြွေစေ့ Stats ကတော့အတွက်ဖြစ်စေကိုယ်တိုင်ဝယ် / ရောင်းငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအမြင်အဘို့သင့်လဲလှယ်သို့မဟုတ်ပိုက်ဆံအိတ်ထပ်တူပြုခြင်းအားဖြင့်သင့်အစုစုကိုတက်သတ်မှတ်မည်။ အလွယ်တကူမျိုးစုံတွင်လည်းတက်သတ်မှတ်မည်။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူသင့်ရဲ့အစုစုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါနှင့်အချိန်ကျော်သင့်ရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုခြေရာခံ။ သင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေများကိုနှင့်သင်၏တွင်လည်းတစ်ဦးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဝေမျှနိုင်ပြီးသူတို့အကြွေစေ့ Stats ကတော့ app ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။
သငျသညျတစ်ခုတည်းအခွင့်အလမ်းကိုလက်လွတ်မရရှိနိုင်ပါအပေါငျးတို့သ cryptocurrencies များအတွက်စျေးနှုန်းကန့်သတ်, အသံအတိုးအကျယ်နှင့်စျေးကွက်ထုပ်သတိပေးချက်များထသတ်မှတ်မည်။ ငါတို့သည်သင်တို့သိစေမယ်!
သင်အလွယ်တကူစျေးကွက်၏ထိပ်ပေါ်မှာနေဖို့နိုင်အောင်အကြွေစေ့ Stats ကတော့တစ်ခုတည်းမျက်နှာပြင်မှ 40 ကျော်ရင်းမြစ်များမှအပေါငျးတို့သ crypto related သတင်းတတ်၏။
အလွယ်တကူ crypto စျေးနှုန်းများနှင့်သင့်အစုစုကိုရယူနိုင်ရန်အတွက်အသုံးပြုသူဇာတိ Widgets တွေ
* အပတ်စဉ် update
ကျနော်တို့အစာရှောင်ရွှေ့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများကိုပိုမို features နဲ့တိုးတက်မှုများနှင့်အတူအသီးအသီးအပတ်ကအကြွေစေ့ Stats ကတော့ app ကို update လုပ်။ သငျသညျ feedback.coinstats.app မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ backlog နှင့်အစီအစဉ်များကိုစစျဆေးနိုငျ
ကျနော်တို့အကြွေစေ့ Stats ကတော့သုံးနေစဉ်သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ပျော်ရွှင်နေပါပြီ! မည်သည့်အကြောင်းပြချက် support@coinstats.app မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့။
ရတာဟာအကြွေစေ့ Stats ကတော့ရေးအဖွဲ့
ထပ်တူပြုခြင်းများအတွက်ထောက်ပံ့ထားဖလှယ်မှု: Binance, Bittrex, Kraken, Liqui, Cryptopia, Coinbase, Cex.io, Bitfinex, GDAX, Poloniex, Huobi Pro ကို, Bitso, Bitstamp
ထပ်တူပြုခြင်းများအတွက်ထောက်ပံ့ထားပိုက်ဆံအိတ်: Ethereum (ETH) ပိုက်ဆံအိတ်, Bitcoin (BTC) ပိုက်ဆံအိတ်, ဂယက်ထ (XRP) ပိုက်ဆံအိတ်, Siacoin ပိုက်ဆံအိတ်, Neo ပိုက်ဆံအိတ်။ dash ပိုက်ဆံအိတ်, DeepOnion ပိုက်ဆံအိတ်, Cardano (ADA) ပိုက်ဆံအိတ်
သင်တို့ကိုလည်း https://t.me/coinstatsapp မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြေးနန်းအသိုင်းအဝိုင်း join လို့ရပါတယ်
Coin Stats - Crypto portfolio tracker အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Coin Stats - Crypto portfolio tracker အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Coin Stats - Crypto portfolio tracker အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Coin Stats - Crypto portfolio tracker အား အခ်က္ျပပါ
catappult စတိုး 37.68k 43.42M
Coin Stats - Crypto portfolio tracker ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Coin Stats - Crypto portfolio tracker အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.5.0.9
ထုတ်လုပ်သူ Coin Stats, Inc
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://coinstats.app/privacy.html
App Name: Coin Stats - Crypto portfolio tracker
လက်မှတ် SHA1: 31:00:35:D4:15:26:68:34:C4:4A:D5:DE:AC:A3:44:5C:63:1D:6B:C6
အဖွဲ့အစည်း (O): Coinstats
Coin Stats - Crypto portfolio tracker APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ